Qhagamshelana Nathi - Gemological Institute of Cambodia
Isitrato sasebusuku seNtengiso, Siem Reap, Cambodia
Nceda funda FAQ yethu phambi kokuthumela kwethu umyalezo.
Ukhuseleko kunye nemfihlo
Nceda unxibelelane nathi.
ngamana odola isatifiketi xa udibanisa kwento ukuze inqwelo yakho. Ukwenza oku, nqakraza kwikhonkco "yongeza isatifikethi samatye kule nto" kwiphepha item iinkcukacha ngaphezu "ngeza kwitshathi" iqhosha. Oku kuzakuvula iinketho isiqinisekiso.
Ilitye ngalinye elivela kwiGEMIC liligugu lendalo elenziwe nguMhlaba. Asisebenzisi kwizinto zokwenziwa okanye ezenziwe ngeelebhu "zexabiso".
Izinketho zentlawulo kunye nemigaqo-nkqubo
Cofa "uqhubeke uphume" kwaye ufake idilesi yokuthumela.
Ukuba unengxaki yokwenza intlawulo okanye ungathanda ukuxoxa ngezinye iindlela zokuhlawula, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Zonke iipakeji ezivela kwi-GEMIC zibandakanya i-invoice epheleleyo. Nceda unxibelelane nathi ngaphambi kokufaka iodolo yakho ukuba ufuna i-invoyisi ebunjiweyo okanye akukho invoyisi kwaphela.
Isikali sokucaca kwelitye elimbala
VS : Ukucoceka kwamehlo - ukufakwa okuncinci kakhulu; ukufakwa okuncinci kunokubonwa ngamehlo aqeqeshiweyo okanye ngaphantsi kokuphakanyiswa kwe-10x.